Wararka Maanta: Sabti, Mar 28, 2020-Madaxweyne Deni oo shacabka Puntland ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurka Coronavirus
“Waan dareensanahay duruufaha dadkeena ku xeeran lakiinse waxaan ku baaqaynaa in la yareeyo; isu socodka laga maarmi karo, xafladaha iyo kulamada sida maqaaxiyaha iyo goobaha cibaadada,” ayuu yidhi madaxweyne Deni
Madaxweyne Deni ayaa sheegay inay Puntland qaaday talaabooyin looga hortagaayo faafidda caabuqaan inuu dalka ku faafo.
Hadalka madaxweyne Deni ayaa kusoo beegmaya iyadoo 7 qof oo shacab ah la galiyay xaalad karantiil ah kadib markii ay iskood ah isku geeyeen xarumaha caafimaadka ee Garowe.
Dadka la karantiilay qeybtood waaa ajaanib kasoo jeeda dalka Hindia. sidoo kale, dadka gudaha waxaa ku jira kuwa ka yimid dalka dibadiisa gaar ahaan Ingiriiska iyo Maraykanka.
Isbitaalo lagula tacaalidoono dadka uu qabat cudurka Coronavirus ayay Puntland ka furtay magaalooyinka waaweyn sida Garowe, Gaalkacyo iyo Bosaso.